Arturo Vidal oo si cad u sheegay xaalada kaliya uu kaga tagi doono kooxda Barcelona – Gool FM
Arturo Vidal oo si cad u sheegay xaalada kaliya uu kaga tagi doono kooxda Barcelona
(Barcelona) 13 Juun 2020. Xiddiga qadka dhexe kooxda Barcelona ee Arturo Vidal ayaa xaqiijiyay inuu Blaugrana ka tagayo xagaaga dambe haddii uusan dareemin qiimahiisa.
Sidoo kale xiddiga xulka qaranka Chile ee Arturo Vidal ayaa ka hadlay xiriirka wanaagsan ee uu la leeyahay tababaraha kooxda Inter Milan ee Antonio Conte.
Qandaraaska Arturo Vidal ee kooxda Barcelona ayaa wuxuu ku egyahay xagaaga 2021, wuxuuna u muuqdaa inuu ka tagayo Blaugrana dhamaadka xilli ciyaareedka, kaddib laba xilli ciyaareed uu soo xirnaa maaliyada naadiga reer Catalonia.
Arturo Vidal ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “El Periódico” ee gobolka Catalunya wuxuu kaga hadlay mustaqbalkiisa kooxda Barcelona, wuxuuna yiri:
“Waxaan ahay 33 sano jir, laakiin tababarka si fiican ayaan ugu dareemayaa inaan awood u leeyahay inaan ku ciyaari karo heerkeyga ugu sarreeya seddex ama afar xilli ciyaareed oo kale”.
“Waxaan heysanaa labo bilood oo dheeri ah oo aan ku ciyaarno, waan ku faraxsanahay, xiriirka aan la leeyahay asxaabteyda aad ayuu u fiican yahay, laakiin waxaan rabaa inaan dareemo qiimaheyga, haddii aysan sidaas noqonin, mustaqbalkeyga waxaan ka raadin doonaa koox kale”.
“Waan jeclahay ka qeyb qaadashada iyo ciyaarista, ulama jeedo kulamada oo dhan, balse kuwa ugu adag uguna muhiimsan”.
“Xiriir aad u wanaagsan ayaan la leeyahay Antonio Conte, wuuna ogyahay in aan leeyahay dareen guuleed, waxaana suurtogal ah inuu ugu kalsoonaado”.
Kooxda Real Madrid oo indhaha ku haysa labo xiddig oo ka tirsan Manchester City